Suleymaan Maxamed: “Dowladda cusub waxa aan ka codsaneynaa in Gobolka Gedo kasoo saarto Ciidankii Farmaajo uu geeyay”. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Suleymaan Maxamed: “Dowladda cusub waxa aan ka codsaneynaa in Gobolka Gedo kasoo...
Suleymaan Maxamed: “Dowladda cusub waxa aan ka codsaneynaa in Gobolka Gedo kasoo saarto Ciidankii Farmaajo uu geeyay”.
Suleymaan Maxamed Maxamuud, Wasiirka Warfaafinta DG Jubbaland oo la hadlay BBC Somali ayaa Dowladda cusub ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbaday in Dowlad-Goboleedkiisa dib ugu soo celiso Maamulka Gobolka Gedo oo saddexdii sano u dambeysay maamulayaan maamul gacansaar la leh Madaxweynihii 9aad ee JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wasiir Suleymaan waxa uu sheegay in Dadka Gedo ay u baahan yihiin dib u heshiisiin dhexdooda ah si loo xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee Gooni socodka ka dhigay maadaama Maamulka ka amar-qaadanayay Villa Somalia uu ka ilaaliyay in ay wax la qaybsadaan DG Jubbaland sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweynaha 10aad ee JFS ayuu Wasiirka Warfaafinta DG Jubbaland ka dalbaday in ay gacanta sharciga ah ee Dowlad-Goboleedkaas kusoo celiyo Gobolka Gedo isla markaana uu door wanaagsan ka qaato sidii ciidanka Farmaajo uu geeyay Gobolkaas.
“Hadda waxaan ka rajeynaynaa dowladda cusub in ay qaabkii hore wax ka badasho oo maamulka sharciga ah sida sharciga ah ay ku soo celiso dowlad goboleedka Jubbaland. Wadahadal iyo dib u heshiisiin ay sameyn doonaan dowladda jubaland iyo dowladda cusub-na ay sameyn doonaan sidaana khilaafaadkii jiray lagu xalin doono ayaan rajeynayna” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta DG Jubbaland.
“Madaxwayne Xasan Sheekh wuxuu wadanka soo xukumayay 2012 ilaa 2017-kii uu gaarsiiyay heer doorasho oo si xor ah ayuu xukunka ku wareejiyay sidaasi darteed waa nin nabad doon ah, waa nin og dhibaatada ka jirta Soomaaliya waxaan is leenahay khilaafaadkii iyo boogihii hore waxaan u aragnaa in uu tallaabo qaadi doono” ayuu intaa ku daray Wasiirka Warfaafinta DG Jubbaland Suleymaan Maxamed Maxamuud.
Khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgalay Madaxweynihii 9aad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha DG Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe sababay in Villa Somalia ciidan geyso Gobolka Gedo oo ay ku dagaalameen askarta labada dhinac.
Previous articleRaysal Wasaare Rooble: Waxaan madaxweyne Xasan Sheikh kula dardaarmayaa inuu dalka ka ilaaliyo Milkiile
Next articleKing, Crown Prince congratulate new President of Somalia